Thursday November 22, 2018 - 18:58:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanayo wadanka Pakistan ayaa sheegaya inuu jiro khilaaf hoose oo u dhexeeya Mareykanka iyo Pakistan kaas oo salka ku haya kaalinta ay xukuumadda Islamabad ku leedahay la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan Argagixisada ee mareykanku uu ka wad
Dowlada Pakistan ayaa markii ugu horreysay ku hanjabtay in maanta wixii ka dambeeya aysan ka shaqeyn doonin danaha dalka mareykanka ayna ka fikiri doonto kaliya Masaalixdeeda gaarka ah.
Go’aankan ayaana yimid dhowr maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyey xukumada Islamabad in ay mareykanka ka qarisay macluumaad dhowr ah oo ku saabsan Ururka Alqaacida, isagoo tusaale usoo qaatay ina y ka qariyen Jogitaankii Sheekh Usama Bin Laden ee magaalada Abotabad.
Wazaarada arrimaha dibadda Pakistan ayaa lagusoo warramaya in ay u yeertay Safiirka mareykanka u fadhiyo magaalada Islamabad ayna u dhiibtay warqad cabasho ah oo ay kaga jawaabeyso eedeymihi uu madaxweyne Trump usoo jeediyey, kuwaas oo ay ku tilmaantay kuwa aan dhihistooda laga fiirsan, sidoo kalena aan sal iyo raad laheyn.
Safiirka mareykanka ee magalada Islamabad ninka lagu magacabo Paul Jones ayaa xaqiijiyey in warqada uu ka gudoomaya wazaarada arimaha dibada Pakistan, hadana uu gaarsiin doono Aqalka cad ee looga arimiyo dalka mareykanka, si loo dhameeyo arinkan oo uu tilmaamay inuu dhibi doono cilaaqaadka labada dowladood.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si aad ah u weeraray doorka ay dowlada Pakistan ku leedahay dagaalka ka dhanka ah argagixsada, isagoona ku tuhmay in Pakistan ay gabaad siiso dadka ay mareykanku baadi goobayaan, ayna ka qariso macluumaadkooda iyo halka ay ku sugan yihiin, hadalkaas ayaana cara xoogan ku beeray Raisal wazaaraha cusub ee wadanka Pakistan.
Eedeymaha uu Trump soo jeediyey waxaa kamid ah in dowlada Pakistan ay malaayin dollar ka qaadato dalka mareykanka, hadana aysan suurta gal ahayn inay ka qariso maclumadka ku adan koxaha argagixisada ah ee mareykanku dagaalka kula jira.
Cimran Khan oo ah Raisal wazaaraha cusub ee dalka Pakistan ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray, aad ayay u yaryihin wadamada ay mareykanka xulafada yihiin ee bixiyey mid lamid ah naf hurka ay bixisay dowlada Pakistan iyo sida ay Islamabad mareykanka ugala shaqeysay la dagalanka Al Qaacida iyo ururada kale ee argagixisada ah.
Waxa uu yiri in qaladadki dhacay mudada 17ka sano ah dusha laga saaro Pakistan, waxaa ka habooneyd in la is weydiiyo waxa ay qabteen 140000 oo askari oo ka socday Ururka NATO, ayna ka garab dagaalamayeen 250,000 oo maleeshiyad Afghaniyin ah, ayna ku baxday lacag dhan 1 Trillion oo dollar, maadamada Daaliban wali ay Afghanistan ka dagalameyso, iyadoo sidii hore ka awood badan.
Trump ayaa tiro dhowr jeer ah kusoo celiyey dowlada Pakistan, waxa ay ogeyd halka uu ku sugan yahay hogamiyaha Alqacida Sheikh Usama Bin Laden, kahor intii aysan dilin ciidanka Mareykanka sanadki 2011-ka, isagoo is moogeysinaya in tiro dhowr jeer ah ay dowladiisu shaacisay in sirdoonka Pakistan ay kusoo warageliyen halka uu sheikh ku sugan yahay, si wadajir ahna ay uga wada shaqeyen qorshihi lagu dilay Sh. Usama allaha ka aqbale Shahaadadiisa.
Tobanaan katirsan Ciidamada Dowladda oo lagu dilay Weerar ka dhacay degmada Awdheegle